Google Adsense ho an'ny karoka: Valim-pifandraisana tafiditra ao amin'ny WordPress | Martech Zone
Alatsinainy, Septambra 4, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Na dia nanao maodely kely aza tamin'ny WordPress aho tamin'ny faran'ny herinandro, dia nahita fanamarihana iray momba ny fampidirana ny valin'ny Google Adsense ho an'ny fikarohana ao amin'ny pejin'ny Valin'ny Fikarohana. Tsotra kely ity raha manana tranokala mijanona ianao, saingy sarotra kokoa ny miasa ao anatin'ny WordPress. Soa ihany, Google nanao asa tsara (toy ny mahazatra) tamin'ny fanoratana script madio madio mba hampidirina ny valiny.
Nanitsy ny maodeliko "Pejy" fotsiny aho ary nampiditra ny kaody izay takin'i Google amin'ny pejy fandraisana. Manana ny valin'ny fikarohana napetraka ao amin'ny pejiko karoka aho (https://martech.zone/search). Avy eo, nohavaoziko ny pejiko Fikarohana miaraka amin'ny endrika karoka (miaraka amina fanovana kely vitsivitsy).
Ny script omen'i Google dia manan-tsaina ihany aseho raha misy valiny fandefasana, ka ny pejiko hafa dia tsy mampiseho na inona na inona. Mieritreritra aho fa afaka nanoratra 'raha fanambarana' izay mampiseho ny valiny raha toa ka mitovy amin'ny pejy fikarohana ny pejy. Na izany aza, tsy nanahirana aho satria tsy hiseho izany raha tsy izany. Heveriko fa kely ny fanapahana ary tsy mety, saingy tsy maninona izany.
Ny dingana manaraka nataoko dia ny miantoka fa tsy misy mpifaninana amin'ny mpampiasa ahy tonga tamin'ny valin'ny fikarohana! Manantena aho fa azoko daholo!
Andramo izany Eto.
Tweaks: Mifindra amin'ny endrika malalaka kokoa